★မြန်မာ့အလင်း★: သို့ . . . ကြက်တူရွေးSV
ကြက်တူရွေး SV ရဲ့ မူရင်းစာကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အဖြူတွေကို ဂုဏ်ဖေါ်ပြီး.. ကုလားကိုထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ မဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ။ ကိုယ်ပိုင် ဥာဏ်မရှိပဲ ကြက်တူရွေးလိုပဲ အသံကြားတာကို လိုက်အော်နေတဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို ထောက်ပြမယ်နော်။ မီဒီယာတွေက စကားလုံးလှလှလေးတွေကို ကြိုက်သလောက်သုံးပြီး ငြင်းနိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဖက် တက္ကသိုလ်ကြီးတွေထုတ်တဲ့ စာအုပ်ထူထူကြီးတွေက စကားလုံးလှလှလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး ငြင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျုပ်ပြောတာက ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပြီး မှန်ကန်တယ်ဆိုတာတော့ ဖတ်တဲ့သူတွေက သိကြမှာပါ။
(မြန်မာတွေ အားလုံးကော ကောင်းကြရဲ့လား..မြန်မာတွေ မှာ ပြုပြင်သင့်တဲ့ စိတ်ထားတွေ အားကြီးရှိပါတယ်...)
မြန်မာတွေအားလုံးကောင်းတယ်လို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာတွေဟာ တာဝန်မဲ့တယ်။ မြန်မာတွေဟာ အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်လိုစိတ်မရှိဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်နေတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒီမိုနဲ့ နအဖ ၂ ဖက်စလုံးမှာ လူဆိုးလူကောင်းရှိတယ်လို့ပဲပြောတာပါ။ မြန်မာလူမျိုးမှပြုပြင်သင့်တာ မဟုတ်ဘူး … အစ်မတို့ အထင်ကြီးတဲ့ အဖြူ၊ တရုတ်၊ ကုလားတွေလဲ ပြုပြင်သင့်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးမှာ အဆိပ်ခတ်တယ်လို့ စွတ်စွဲခံရတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖြူအစိုးရပဲရှိတာ.. ကြက်တူရွေးမမလေး သတိထားမိရဲ့လားဗျာ?
(ဒါပေမယ့် သိစေချင်တာကတော့ ဘာသာတိုင်းကောင်းတာရှိကြပါတယ်..ခေတ်ကာလ ရွေ.လျောတော့ လိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့ သူတွေ ပေါ်မူတည်ပြီး ဘာသာတရားတွေ ပျက်ဆီးလာခဲ့တာလို. ကျမ ထင်ပါတယ်..)
ကျမထင်တယ်? . . . ကျမထင်တယ်? . . . ကျမထင်တယ်? အဖြူ၊ တရုတ်၊ ကုလား လိမ်သမျှ အားလုံးကို ယုံတယ်။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ စကားတွေက ခင်ဗျားရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ မဟုတ်ဘူး။ သူများ ပြောသံကြားတာကို ကြက်တူရွေးလိုပဲ လိုက်ပြောနေတာပါ။ နောက်ဆိုရင် ကျမထင်တယ်လို့မပြောပါနဲ့.. ကုလားကြီးက ကျမကို အဲလို သင်ပေးထားတယ်လို့ ပြောပါ။
ကြက်တူရွေးsv ပြောသလို .. . ရှေးတုံးက မွတ်ဆလင်တွေက ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်.. မိုဟာမက်ခေတ်ကတည်းက ဒီနေ့အထိ မွတ်ဆလင်တွေ ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့ သာဓကလေးကို ပြစမ်းပါဦး။ မိုဟာမက် သူ့ချွေးမကို ကြာကူလီရိုက်တာကို ကောင်းတယ်လို့ထည့်တွက်နေသလား?။ မွတ်ဆလင်သမိုင်းပြန်ကြည့်ရင် စစ်တိုက်တယ်… မိန်းခလေးတွေကို ဖျက်ဆီးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဂျူး အားလုံးရဲ့ ဘာသာရေး မြေတွေကို လုယူပြီး ပလီတွေ ဆောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေက ကောင်းသတဲ့လား? ဒီမယ်. . မွတ်ဆလင်မှာ ကောင်းတဲ့ သင်ကြားချက်တစ်မှမရှိဘူး။ ဘာသာခြားတွေကို ရန်သူလိုသဘောထားပြီး.. သတ်ဖြတ်ဖို့ ဆုံးမထားတယ်။ ကျုပ်တို့ကို ကူညီရင် .. အပေါင်း အသင်းလုပ်ရင် ငရဲရောက်မယ်လို့လဲ ဆုံးမထားတယ်။ ခင်ဗျားတို့လို သဘာခြား မိန်းခလေးကို ကုလားက ယူနိုင်ရင် ပလီက ဆုငွေပေးတယ်ဗျ။
(မွတ်ဆလင် မှာလဲ အစွန်းရောက်တွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါ...မွတ်ဆလင်ဝါဒ မကောင်းဘူး ယုတ်ညံ့တယ်လို.သာပြောနေကြတာ...ကျမတို.ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချုို.ကတော့ အဲ့လိုဘာသာဝင်တွေလုပ်တဲ့ အလုပ်မျိုး လိုက်လုပ်နေကြပါကောလား...)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှာလဲ လူသတ် မုဒိမ်းကျင့်သူတွေရှိတာနဲ့ မွတ်ဆလင်နဲ့အတူတူသွားနှိုင်းနေတဲ့ ကိစ္စဟာ ကြက်တူရွေးလိုပဲ သူများပြောသံကြားတာနဲ့ လိုက်ပြောနေတာပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစ်မနားလည်အောင် ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြမယ်။ ဥပဒေကို ထိမ်းသိမ်းနေတဲ့ ရဲတွေလည်းပဲ ရာဇ၀တ်မှုလုပ်တာတွေရှိပါတယ်။ ရဲတချို့ စည်းကမ်းကိုချိုးဖေါက်တာကြည်ပြီး .. . ဓါးပြ၊ သူခိုးတွေနဲ့ အတူတူလို့ ပြောလို့မရဘူးလေ။ အစွန်းရောက် ဓါးပြတွေကပဲ လူသတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေကို လုပါတယ်လို့ ပြောရင် ရယ်စရာဖြစ်နေမယ်။ ဒါ့ကြောင့် မုဒိမ်းကျင့်၊ လူသတ်၊ ခိုးတဲ့ကိစ္စတွေကို တားမြစ်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အဲဒါတွေကို လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့ မွတ်ဆလင်ရဲ့ အဆုံးအစ်မတွေက အတူတူပဲလို့ ပြောကနေကတည်းက အစ်မရဲ့ အခြေခံ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရည်ဘယ်လောက်နိမ့်နေလဲဆိုတာ သဘောပေါက်သင့်ပါပြီ။ အစ်မလိုလူမျိုးက ဒီမိုဝါဒကို အကောင်းမြင်နေတာ သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။
(ကျမ မှန်တယ်ထင်လို.လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စအတွက် ကျမ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ပါ..)
မှန်တယ်ထင်လို့ နောက်မဆုတ်တာကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဦးဏှောက်နဲ့ မစဉ်းစားပဲ အဖြူနဲ့ ကုလားတွေ ပြောသမျှ အမှန်လို့ လက်ခံပြီး စွတ်လုပ်ရင်တော့ မကောင်းဘူးနော်။
(ဒါပေမယ့် မှားသွားတာရှိခဲ့ရင်လဲ ပြန်ပြင်ပေးဖို.ဝန်မလေးပါ....ဒါဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေ ပြုပြင်သင့်တဲ့ အချက်တချက်ပါ...မြန်မာတွေ ရဲ့ အားနည်းချက်ပါ...မသိတာ မတတ်တာရှိရင် မေးဖို.ပြုပြင်ဖို.သူများပြောလို.မှန်ရင် လက်ခံဖို.ဝန်လေးတတ်ကြပါသည်..တခနတာ လူအောက်ကျသွားလို.မသေပါ..ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ တဘဝလုံး အောက်ကျနေရမှာပါ..)
ကိုယ်တိုင်က မီဒီယာတွေပြောသမျှ အမှန်လို့ မျက်ကန်းယုံကြည်နေတာကို အရင်ပြုပြင်သင့်တယ်။ အဖြူနဲ့ ကုလားတွေ လိမ်သမျှကို ဦးဏှောက်နဲ့ မစဉ်းစားပဲ .. ကြက်တူရွေးလို လိုက်ပြီးပြောနေတဲ့အကျင့်ကို အရင်ဖျောက်ပါ။ မွတ်ဆလင် အစွန်းရောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အဓိပါယ်ကို မသိပဲ ကြက်တူရွေးလို အော်နေတဲ့ အကျင့်ဆိုးပါဖျောက်ပါ။ ပြီးမှ တခြားမြန်မာတွေကို ဆိုဆုံးမပါဗျာ။
(ရှင်ပြောတဲ့ ဘလော့တွေကို ကျမရောက်ဖူးပါတယ်...ကွန်မန်.တော့ မပေးဘူးပါ...ဆန်.ကျင်ပြောဆိုရဲသူမရှိဘူးလို.တော့ မထင်ပါ...အချိန်ကုန်မှာရယ် ...ဖက်လိုက်ပြောဆိုထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ က မြန်မာ့သတင်းစာတွေ နဲ.မခြားဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားမှု.နည်းပါးပြီး ခနတဖြုတ်သာ ဝင်ကြည့်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.)
နအဖဘလော့လို ကော်မန့်တွေကို လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်မပေးရဲတဲ့ ဒီမိုဘလော့တွေကိုတော့ အချိန်ကုန်ခံပြီး သွားလည်တယ်ပေါ့? အပြောကြီးနေတာတွေ ရပ်ပါတော့ဗျာ။ စစ်ဗိုလ်တွေက စကားကိုလှည့်ပတ်ပြောလိုက်တိုင်း ဘာကိုပြန်ပြောရမှန်းမသိပဲ . . . . လူပုံအလည်မှာ . . . ဒီမိုတွေ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ မျက်လုံးလေး ပေကလပ် ပေကလပ်လုပ်ပြီး ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ကုန်တာ . . . . လူတိုင်းသိနေတာပဲ။ အကျိုးမရှိပဲ ဗြောင်လိမ်နေတာ မသင့်တော်ပါဘူးဗျာ။
(ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ်ဘာသာ အစော်ကားမခံရပါစေနှင်..အဲ့လိုပဲ သူများဘာသာကို စော်ကားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ...မကောင်းမှန်းသိရင် သူတို.လို မလုပ်မိအောင် သင်ခန်းစာယူလိုက်ပါ..)
ကြက်တူရွေး SV.. ကုလားကြီးပါးစပ်ထဲက ထွက်လာတဲ့စကားကို ကြက်တူရွေးပီပီ မစဉ်းစားပဲ ပြောနေပြန်ပြီ။ ငါမမွေးခင်ကတည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကုလားတွေကို စော်ကားလာတာ။ ဆူးလေဘုရားမြေပေါ် ပလီဆောက်ခဲ့တာ ငါ့မှာပဲအပြစ်ရှိတယ်ပြောဦးမလို့လား?။ မိန်းခလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်ရင် ပလီက ဆုငွေပေးတာ ငါ့ကြောင့်ပဲပေါ့နော်?
ကဲကဲ.. ကျုပ်ပြောမယ်.. ဒီမိုပဲဖြစ်ဖြစ်.. နအဖပဲဖြစ်ဖြစ်.. အဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်.. . ကွန်မြူနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် . . .ရှင်ဘုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေသူတွေ အားလုံးဟာ သူတို့အကျိုးအတွက်ပဲ လုပ်နေပြီး. . . စကားပြောရင် နားဝင်ချိုအောင် လိမ်ညာပြောတတ်တယ်ဆိုတာ ကလေးက အစသိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကြီး ချောက်ထဲမကျအောင် ကယ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ ကြက်တူရွေးလေးအတွက် ရင်ခုံစရာ စကားလေး တစ်ခွန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြက်တူရွေး အသက်အရွယ်က ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ စကားလုံးလှလှလေးတွေမှာ သာယာပြီး . . ကုလား၊ တရုတ်၊ အဖြူတွေ ပြောတိုင်းယုံပြီး လိမ်လို့ လွယ်တဲ့ ကြက်တူရွေးလေးဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်ကို အားထုတ်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ကြက်တူရွေးအစစ်ကိုချစ်သော်လဲ ကြက်တူရွေးလိုပြုမူသည့် ဒီမိုများကိုမုံန်းနေသည့်
(p.s သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ ဆိုတာကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံခေါ်ပါ။ မခေါ်က ပြဿနာရှာခံရမည်။ ကျနော်အသုံးပြုထားသည့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံကို အစ်မဆီမှ ဖြုတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်)
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:02 AM
ဟိုကတော့ မီဒီယာပြောသမျှလိုက်ပြောတဲ့ ကြက်တူရွေး... မင်းကတော့ မီဒီယာ လွှင့်သမျှဗီဒီယိုတွေကို လိုက်သယ်ပြီး လွှင့်ပေးနေတဲ့ အထမ်းသမား ကူလီပေါ့ကွာ...ကူလီရေ ကူလီရ ဆက်သာလုပ်ကွ... ဟားဟားဟားးး...။ အဲဒါမှ အားမရသေးရင် ဖင်ပါခံပေးလိုက်ဦး...ကြားလား? ဟီးဟီး...။